Kuze kube manje, abantu abaningi banesithakazelo sokwenza umusi ovela ephepheni. Kumelwe kuthiwa ngokushesha ukuthi le nqubo ilula, kodwa iyingozi. Ngakho-ke, uma kungenzeka ukwenza ngaphandle kwezinto ezinikeziwe, kungcono ukugwema ukwakhiwa kwalo. Uma uzama ukuzama, ke uqaphele kakhulu futhi ulandele imiyalo ngokuqondile.
Ngaphambi kokuba wenze intuthu ephepheni, udinga ukulungisa konke okudingekayo. Ngomsebenzi uzodinga amaphephandaba amadala, i-saltpeter, ibhodlela lepulasitiki (umanyolo), kanye nezindlu zomkhiqizo (ungasebenzisa i-tin okuvela esiphuzweni sokuphuza amandla). Manje siqala ukwenza isixazululo sokufaka iphepha. Ukuze wenze lokhu, kwelinye ilitha lamanzi, qeda 300 g of saltpeter. Ukuze imithi ichithe kahle, isitsha kumele sithuthukiswe ngokuphelele. Isixazululo sincike enani lezicucu.
Uma i-foam ivela ebusweni be-liquid, kumele isuswe. Manje ungakwazi ukufaka isikhalazeli ku-sprinkler ebhodleleni bese uqala inqubo yokufaka amashidi. Uma wazi ukwenza umusi ovela ephepheni, ungakhohlwa ukulandela imithetho yokuphepha. Phambanisa amaphephandaba kangcono emgwaqweni. Kulesi simo, indawo okuzobekwa ngayo amashidi kufanele ibe bushelelezi futhi ihlanzeke. Iphepha elilandelayo kufanele lifakwe emathini asetshenziwe kakade.
Ngaphambi kokwenza umusi ovela ephepheni, ukubeka impahla emagodini, umoya wokuphefumula kanye nezinkukhu zokuzivikela. Njengoba isisombululo singavimba emaphethelweni wephepha, okudlule kumele kuthole kancane ngaphambi kokubeka ishidi elilandelayo. Ngemuva kokuba wonke amaphephandaba agcwele emgqonyeni futhi ehambelana ne-saltpetre, kufanele aphendulwe futhi avunyelwe ukuwagcoba kahle. Isigaba esilandelayo sizobe soma amashidi. Ukuze wenze lokhu, ungamane uwafake emiphakathini yokhuni. Kodwa-ke, umuntu kufanele acabangele isimo esibalulekile: akukho cala le nqubo ingenziwa ilanga elivulekile.
Ngokulandelayo, uzofunda, empeleni, ukuthi ungayithuma kanjani iphephandaba. Lo msebenzi ngeke uthathe isikhathi esiningi. Okokuqala, wonke amashidi kufanele agwetshwe izikhathi eziningana phakathi. Khona-ke isici ngasinye kumelwe sibe nesisindo esiqinile kakhulu esiphambanweni. Kulesi sigaba, izakhi zizofakwa ngaphakathi komunye, futhi kudingeka uqiniseke ukuthi zicindezelwa njengokuqina ngangokunokwenzeka.
Ngemuva kokususa ishidi lokugcina elisontekile ngaphakathi, ungakwazi ukugoqa umkhiqizo nge-tape scotch. Leli phepha, elizobheka kusukela ekugcineni, kuyadingeka ukuthi lihle kahle. Empeleni, emva kwalokho umkhiqizo ulungele ukusetshenziswa, udinga nje ukufaka i-fuse encane yokushisa. Uma ufuna i-dymovuka iphepha ukuthi ibonakale enhle, ungayifaka kwi-tin. Ukuze wenze lokhu, phezulu komzimba kufanele kunqunywe. Sicela uqaphele ukuthi iphakheji lephephandaba kufanele lihambisane kahle nezinhlangothi ze-can. Uma kukhona igebe phakathi kwabo, umusi kufanele ufakwe uphawu ngephepha.
Ngesikhathi usebenza, qaphela ngangokunokwenzeka, ngoba i-saltpeter ingaba nethonya elibi empilweni yakho. Uma usebenzisa abahloli, kufanele ube kabili ngokucophelela nangokucophelela. Ungasebenzi ngaphandle kwezingubo zokuzivikela!
Ukusungulwa kwe-US-Soviet enobudlelwane: izici, umlando kanye nemiphumela
Indlela ukuhlela ikhefu siphuze ikhofi. Isibonelo imenyu ejwayelekile
Uma ungadli ngemva 6, umphumela ngeke bathathe isikhathi eside!
Nikolay Gerasimovich Kuznetsov - Admiral we Fleet. Russian izindiza yenethiwekhi "Admiral Kuznetsov"